Tenga Multifunction Handmad Stainless Simbi Nereza Kicheni Knife - Mahara Kutumira & Hapana Mutero | WoopShop®
Multifunction Handmad Stainless Simbi Nereza Kicheni Knife
ruvara banga banga risina chinhu
banga banga risina chinhu
Multifunction Handmad Stainless Simbi Nereza Kicheni banga - banga yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Muenzaniso Nhamba: 45212
Rudzi rwe banga: Chef Mapanga
Chopping banga: Chef banga
Butcherknife: KItchen banga
Yakaitwa nemaoko: Yakagadzira butcher banga
Yakazara Tang: 440C yakakwira kabhoni simbi isina simbi
Inokodzera: Kicheni kicheni, hotera, resitorendi, zvipo
Nereza zvinhu: 440C Stainless simbi
Bata zvinhu: Chicken Wing Wood Bata
Kureba kwebasa: 16.5cm
Blade ukobvu: 2.5 mm
Nereza upamhi: 10.2 cm
Net uremu: 245g
Chigadzirwa Chishandiswa: Yakanakira akasiyana mabasa kusanganisira kuchera, kudhizaini, uye kucheka miriwo, michero, hove, nyama, uye zvimwe zvekudya zvekushandisa.
Sharp Edge: Chipande chakagadzirwa ne440C simbi isina simbi, kukwirira kwedombo reRockwell, ruoko rwakakoshwa ruoko. Yakanyatsogadzirirwa tapered simbi isina micheto yekucheka nyore uye kwakanaka. Brushed blade dhizaini iyo anti-chikafu inonamira kune iro banga. Mirror blade, inopinza uye yakasimba, inochengetedza kupenya kwakanaka.
Chicken Wing Wood Handle: yakanyatso sarudzwa huni, hutano, uye zvakatipoteredza zvine hushamwari. Ergonomically yakagadzirirwa mubato, tang yakazara, uye yakakwana muyero wehukweji uye kutonga kwakazara.
Tsananguro yechigadzirwa iyi yakarurama uye banga rakapinza kwazvo. Banga rinochengeta mupendero waro uye dhizaini yebanga rinoita kuti hove yekuzadza ive nyore.